I-San Jose, iCabo de Gata Natural Park. - I-Airbnb
I-San Jose, iCabo de Gata Natural Park.
Indlu kaYiyi yindlu yakudala yabalobi ekwiimitha eziyi-40 ukusuka elunxwemeni lweHotel Doña Pakita, kuza kufuneka uhle nje iimitha ezimbalwa ukuze ube selunxwemeni olunye okanye uve ulwandle. Indlu iye yalungiswa ngokupheleleyo, yahlonela iindonga zayo eziyi-50 cm nesitovu sayo. Yonke enye into itshintshwe ngezinto ezihloniphekileyo neziqhelekileyo ezenza ibhokisi Yokuhlola ibe yindawo ecocekileyo nesebenzayo. Ukuze wenze ukuhlala kwakho kube ngathi ukwigumbi elikumgangatho ophezulu kodwa unendawo eninzi.
Ngenxa yendawo yayo entle, yindawo efanelekileyo yokwazi yonke iCabo de Gata Natural Park ngendlela ethe cwaka.
Ime kweyona ndawo isemagqabini eSan José kwiCalle rodaballo 4, kufutshane neHotel Doña Pakita. Kukho zonke iintlobo zeenkonzo ezingaphantsi kweemitha eziyi-300, iivenkile zokutyela, iikhefi, ibhanki, amayeza, njl., kodwa uncedakala ngokuba kwisitrato sabantu abahamba ngeenyawo, apho kungangxolwa khona. Ndingatsho ukuba olona lwandle lugqwesileyo eSan José , ulwandle lweHotele, luxakeke kakhulu kwaye luneenkonzo ezintle kakhulu, ezikwiimitha eziyi-40 ukusuka endlwini.
I-La Casilla inazo zonke iinkcukacha eziyimfuneko zokunyuka intaba, iindlela eziyi-4x4, ukuhamba ze, iindlela zokukhwela amahashe, iindlela zentaba-mlilo, iindlela zeentaba-mlilo, iindlela zeentyatyambo...fumana iimuvi zeemuvi ezintle okanye ulungiselele uhambo oluya eGranada uze ubuyele kwangolo suku.
Emva kweminyaka eyi-48 ndihlala kule ndawo, ndinokucebisa ndize ndilungiselele izicwangciso nezinto onokuzonwabela ukuze ulonwabele ixesha oza kulihlala.
ndikunika izinto onokuzonwabela ezintathu ezivuyisayo:
1 UKUFUMANISA OLONA lwandle luhle nolungabonakaliyo kunye neentlanzi eziya EMPUMA naseNtshona: ixesha elinguhafu ngosuku. Unyaka wonke.
IINDLELA eziyi-2 ezisemaphandleni: Fumana indlela yokuphila yabemi kunye nezithethe zayo kwiindawo ezikhethekileyo.
3- IINDLELA ze-geolological kunye ne-PAISAJngerICAS: Imigodi yegolide, ukwakheka okufunwayo, iimayini.
Cela inkcazelo ngaphandle kokuzibophelela okanye ukucela izinto ozithandayo simahla.
I-La Casilla inazo zonke iinkcukacha eziyimfuneko zokunyuka intaba, iindlela eziyi-4x4, ukuhamba ze, iindlela zokukhwela amahashe, iindlela zentaba-mlilo, iindlela zeentaba-mlilo,…
Inombolo yomthetho: VFT/AL/01126